Wararka Maanta: Khamiis, Mar 22, 2012-MADAXWEYNE SHEEKH SHARIIF: "Runtii waxaan arkay Ciidammo diyaar u ah inay sugaan ammaanka Shacabkooda"
MADAXWEYNE SHEEKH SHARIIF: "Runtii waxaan arkay Ciidammo diyaar u ah inay sugaan ammaanka Shacabkooda" Khamiis, Maarso 22, 2012 (HOL) — Madaxweynaha Somalia, Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo labadii habeen ee ugu dambeysay kormeerro ku marayay degmooyinka Muqdisho qaaarkood ayaa sheegay inuu arkay ciidammo diyaar u ah inay ilaaliyaan ammaanka shacabkooda iyo midka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Sheekh Shariif, ayaa waxaa booqashooyinkan ku wehlinayay wasiirka arrimaha gudaha iyo saraakiil ciidan, wuxuuna xalay habeenkii labaad booqday dhowr saldhig oo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM.
"Runtii waxaan arkay ciidammo diyaar u ah inay sugaan ammaanka shacabkooda iyo midka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho," ayuu yiri Sheekh Shariif oo saxaafadda uga warbixinayay booqashooyinkiisa.
Madaxweynuhu wuxuu hadalkiisa ku daray in saldhigyadii uu tagay uu ugu tagay ciidammo ka tirsan AMISOM iyo DKMG ah oo aad u feejigan, kuwaasoo uu sheegay in howshooda ay dhabar-jab ku tahay qorshayaasha lagu doonayo in nabadda Muqdisho lagu waxyeelleeyo.
"Shacabkiinna inaad si wanaagsan ugu adeegtaan ayaa la idinka doonayaa oo la idinku seexdo," ayuu Sheekh Shariif oo la hadlayay ciidammo uu kula kulmay fariisin ay ciidammadu ku leeyihiin isgoyska Sanca.
Qaar ka mid ah saraakiisha dowladda oo madaxweynaha warbixinno siinayay ayaa sheegay in weerarradii madaafiicda ahaa ee ka dhacay Muqdisho ay ku dhaceen si mas'uuliyad-darro ah, ayna wadaan qorshayaal ay uga hortagayaan.
"Cid wax kuu qabanaysa ma jirto, sharaftaada marka aad dhulka dhigto ma jirto cid intay garabka kaa qabayo ku caawinaysa, waa inaan isku tashanno si aan uga gudbno marxaladda adag ee aan ku jirno," ayuu madaxweynuhu ka sheegay kulan is-dhexgalka bulshada ah oo maanta ka dhacay degmada Xamar-jajab.
Ugu dambeyn, madaxweynuhu wuxuu sheegay in ummadda Soomaaliyeed lagu yiqiin inay yihiin kuwo isku-tashada waxna qabsata, balse 20-kii sano ee lasoo dhaafay lagu waday dhibaatooyin kala duwan.
Khamiis, Maarso 22, 2012 (HOL) — Maamulka Xarakada Al-shabaab ee Kismaayo ayaa maanta soo saaray wareegto lagu mamanuucayo gabi ahaanba ka ganacsiga qaadka oo ay dad fara badani noloshoodu ku tiirsanayd. Dadweynaha Somaliland oo Maalmihii u Dambeeyay aad u hadal hayay xil ka qaadistii Wasiirkii hore ee Maaliyadda 3/22/2012 8:12 AM EST